चीन-ताइवान युद्ध भयो भने के होला? - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : ७ माघ २०७८, शुक्रबार ६ : १५
यही साताको पूर्वाद्र्धमा पाँच चिनियाँ लडाकु विमानले पुनः एक पटक ताइवानी सीमामा घुसपैठ गर्यो। यसरी चिनियाँ लडाकु विमान ताइवानी सीमामा प्रवेश गर्ने क्रमले गत वर्ष ‘रेकर्ड’ नै ‘ब्रेक’ गरेको थियो भने यो वर्ष पनि नौ पटक घुसपैठ भइसकेको छ ।
घुसपैठको यो निरन्तरताले दुई देशबीच तनाव बढिरहेको छ । यसको मुख्य कारण ताइवानलाई ‘चीनमा विलय’ गराउने लक्ष्य रहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले त भनी नै सकेका छन्, ‘ताइवान पुनः एकपटक चीनसँग अवश्य पनि एकीकृत हुने ।’ उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि शक्ति प्रयोग गर्ने क्रम जारी छ । यस्तो आशय राष्ट्रपति चीनफिङले विभिन्न समारोहमा दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।
चीनसँग किन अलग भयो ताइवान?
यी दुईबीच चिसोपना करिब दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै उत्पन्न भएको हो । त्यो समय चीनको मुख्य भूमिमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उक्त क्षेत्रको तत्कालीन सत्ताधारी नेसनलिस्ट पार्टी ९कुओमिन्ताङ०सँग लडाइँ चलिरहेको थियो । १९४९ मा माओत्से तुङको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले लडाइँ जित्यो र राजधानी बेइजिङ कब्जा गर्‍यो । त्यसपछि कुओमिन्ताङका वासिन्दा मुख्य भूमि छाडेर दक्षिण–पश्चिम द्वीप ताइवानतर्फ लागे ।
चीन बलियो कि ताइवान?
इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट अफ स्ट्राटेजिक स्टडिज ९आईआईएसएस०का अनुसार, चीनका विभिन्न प्रकारका सक्रिय सैनिकको संख्या २०।३५ लाख रहेको छ । ताइवानमा केवल १।३६ लाख सक्रिय सैनिक छन् । यसरी चीनको तागत यस मामिलामा ताइवानको भन्दा १२ गुना अधिक रहेको देखिन्छ ।
थलसेना पनि चीनमा ९.६५ लाख छन् भने ताइवानमा ८८ हजार मात्रै । चीनमा नौसेना २।६० लाख छन् भने ताइवानमा केवल ४० हजार । चिनियाँ वायुसेनामा करिब चार लाख छन्, ताइवानमा ३५ हजार । यसका अतिरिक्त चीनसँग सवा चार लाख अन्य सैनिक छन्, जबकि ताइवानमा एकजना पनि छैनन् ।
अन्य मुलुक ताइवानलाई किन महत्व दिइरहेका छन्?
ताइवानको बलियो अर्थव्यवस्था कयौं देशका निम्ति महत्वपूर्ण रहेको छ । संसारभर दैनिक रुपमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्स ९फोन, ल्यापटप, घडी, गेमिङ उपकरणका चिपलगायत० अधिकांश ताइवानमा निर्माण हुन्छन् । चिपको सन्दर्भमा त ताइवान संसारकै नायक बनेको छ । ताइवानको ‘वन मेजर’ नामक कम्पनी एक्लैले संसारको आधा चिप उत्पादन गर्छ ।
के भन्छन् ताइवानी जनता?